Isizathu Sangempela Sokuqasha i-Social Media Guru | Martech Zone
Kule minyaka eyishumi edlule, ngisebenze ngokungakhathali ukwakha okulandelayo online, igunya, futhi ekugcineni ngachuma ibhizinisi. Manje, ngibhekene nabantu abafisa ukuqasha izinsizakalo zami ukuze nami ngibasize benze okufanayo. Ngezinye izikhathi kuba yinkampani enkulu enethalente elihle futhi ngiyakwazi ukuletha. Kwesinye isikhathi akunjalo futhi nginikeza insizakalo ehlukile.
Kule minyaka, ngibuke abanye bedlula i-inthanethi futhi ngifunde okuningi. Ngiphinde ngadlula abanye abaningi… bambalwa kakhulu abanencwadi eshicilelwe noma ibhizinisi labo eligxile ebuchwephesheni babo. Kunginikezwe ukuqonda kokuthi yini okusebenzayo, okungasebenzi, yiziphi izimali ezingasungula igunya lakho, nokuthi yini engakulimaza ngempela.
Kodwa-ke, lonke lolo lwazi akusona ngempela isizathu ongafuna ukungiqasha ngalo. Lolo lwazi lukhona… liku-inthanethi ngokuthunyelwe kwami ​​kubhulogi, my ukubhuloga kwebhizinisi incwadi, nezethulo zami. Uma ungilandela, noma okunye okubizwa ngakho izinkundla zokuxhumana, cishe bonke babeka imininingwane laphaya mahhala. Impela - abaningi banikela ngamathuba okuqeqeshwa afingqiwe ukuze bathole inkambo yokuphahlazeka (yisizathu esihle sokusibuka sikhuluma)… kepha iqiniso ukuthi usengakuthola ngaphandle kokusiqasha.
Lokho ongakutholi mahhala igunya lethu. Ama-social media gurus anokulandela okuhle - imvamisa ngaphakathi kwe-niche enhle. I-niche yami ukumaketha oku-inthanethi, ukumaketha okungenayo nokufaka usesho, ezobuchwepheshe kanye nobunye ubuchwepheshe obuku-inthanethi ukwakha ibhizinisi. Ngenkathi ngibonisana nezinkampani eziningi ngalezo zihloko - ezinye izinkampani ezitshale imali ezinsizakalweni zami zifuna okuhluke kakhulu…
Bafuna eyami ukugunyazwa ngakho-ke bangakwazi ukwakha igunya ngokushesha… kanye ukufinyelela ezilalelini zami.
Abalandeli, abalandeli, abafundi nababhalisile bayimpahla ebalulekile kulezi zinsuku… ikakhulukazi uma ungaqhubeka nokukhulisa lokho okulandelayo. Abanye abantu bangicela ukuthi ngikhulume ngoba babonile futhi bakujabulele ukwethulwa kwami ​​- kepha abaningi kakhulu bangicela ukuthi ngikhulume ngoba bayazi ukuthi ngizokwenyusa ibhizinisi labo noma ingqungquthela yabo kuzethameli zami. Uma ngikhuluma - ngifuna kube umcimbi omuhle… kuthengiswe nge-buzz kuyo yonke i-Intanethi. Kukho konke ukwethembeka, mancane amathuba okuthi ngithuthukise umcimbi engingabambi iqhaza kuwo ... Angimane ngijabule ngawo ngokwanele ukuba ngiwaphromothe ngobuqotho… futhi izilaleli zami zingasho.
Lokho kusho, ngithatha amathuba ami okukhuluma kanye nezincomo ngokungathi sína. Angimane ngikhiphe isincomo ngaphandle kokukholelwa kumthombo - noma ngabe ngikhokhelwa ukwenza njalo. Ngisebenza nezinkampani eziningi engingakaze ngikhulume ngazo online. Akukhona ukuthi angibakholelwa njengabafanelekile, ukuthi kungangadingeki ukubalulalela izilaleli zami. Isingeniso besizobukeka siphume endaweni futhi siphoqeleke.
Ngiyamangala ngenombolo ye- izinkundla zokuxhumana enikeza okuthunyelwe okukhokhelwayo, ama-tweets akhokhelwayo nezincomo ezikhokhelwayo ngaphandle kokuqinisekisa ukuthi zinikeza inani kubalaleli bazo. Bafaka izithombe ezibabazekayo bemi eduze kothile obalulekile ukuthi ngandlela thile banikeze umuzwa wokuthi kumele babaluleke… bheka isithombe ngenhla;).
Ngenza yonke imizamo yokugwema la maqhinga… kungaba yinhlamba kubabukeli engisebenze kanzima ukubakha futhi ekugcineni ngibabeka engcupheni. Ngicabanga ukuthi kuyisu lesikhashana lokufaka imali - futhi kwehlisa izilaleli zabo ngokuhamba kwesikhathi. Eziningi ze- yenza imali online gurus yenza lokhu. Kufanele bakhohlise futhi bathenge izincomo ukuze bahambisane nesimo esikhulayo abasenze online. Izithameli zabo ziyafika zidlule njengoba kutholwa ukuthi bakhohlisiwe.
Uma ufuna ubukhona obukhulu be-inthanethi nokufinyelela kuzithameli ze inkundla yezokuxhumana, izindlela ezilula zokwenza lokhu ukuqasha okukhulu inkundla yezokuxhumana lokho kunokulandelayo okufisa ukuthola ukufinyelela nokwakha igunya ngakho. Ngaphansi kwemihlahlandlela ye-FTC, ngizohlala ngisho ukuthi bayiklayenti noma ngiyanxeshezelwa ngokuvuma kwami. Ngoba ngiqaphele ukuthi angiphushi izilaleli zami kunoma ngubani ofuna ukungiphonsa imali, izilaleli zami azinendaba nokuthi ngikhokhelwe ngakho. Baye babona ukuthi ngisho nezincomo engizikhokhile zizohlala zinikeza inani.
Ukuqasha umphathi wezokuxhumana kungakunika imininingwane ebalulekile nokubonisana okuzosiza ukuqhuba ibhizinisi lakho… kepha isizathu sangempela sokuqasha umuntu ukuthola ukufinyelela kuzithameli zabo kanye negunya ngokuvuma. Ngaphandle kwawo, unendlela ende ephambi kwakho. Ngayo, ungaqaqa ubukhona bakho bezokuxhumana nabaphathi be-inthanethi.
Tags: douglas karruthanda uNkulunkuluinkundla yezokuxhumana